Ogaden News Agency (ONA) – Xidhay loo geystay Shacabka Degmada Dhanaan ee Gobolka Shabeelle
Xidhay loo geystay Shacabka Degmada Dhanaan ee Gobolka Shabeelle
Wakaalada Wararka ee ONA waxaa kusoo dhacay faah faahintii shacabkii lagu xidhay degmada Dhanaan todobaadadii lasoo dhaafay. Ciidamada Gumeysiga Ethiopia ayaa asase isugu jira jidh dil, dhac hantiyeed iyo xidhay la beegsaday shacabka degmada dhanaan. Halkaas oo shacab aad u tiro badan dhibaato loo geystay.
ololahan ayay bilaabeen Taariikhdu markay aheyd 15 June 2015 waxayna maalintaas xabsiga u taxaabeen dad aad u tiro badan waxaaba lanoo xaqiijiyay magacyo kamida dadkii jeelka loo taxaabay oo ay kamid ahaayeen:
1 Cabdi sheekh ibraahim
2 Faadumo shugri axmad
3 Nimco sh cabdi qoorlee
Sidoo kale taariikhdu markay ku beegneyd 20 June 2015 waxay mar labaad ololihii dib ugu celiyeen Degmada dhanaan halkaas oo ay xoolo badan ku dhaceen, jidh dil iyo xidhay baahsana ay u geysteen shacabka Degmada Dhanaan. Dadkii la xidhay waxaa magacyadooda lanooga soo sheegay:
1 Aamina macalim bashiir
2 Xuseen danqad
3 Suleekha shaafici xuseen
4 Cumar aadan yuxuud.
Cumar Aadan Yuxud waxaa laga dhacay 5 neef oo adhi ah. Xoolahaas oo Ciidamada guemysiga Ethiopia ay qasheen.
Tacadiyada leh boobka hantiyeed, kidh dilka, xadhiga, kufsiga iyo dilka loo geysanato shacabka somalida Ogadeniya waa mid joogta ah, askarta iyo masuuliyiinta Woynaha ee geystana illaa hada ma jiraan cid maxkamad loo saaray oo danbiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee lagulakacayo shacabka lagu qisaasay. ciidanka Woyanaha ayaa abaal marin iyo dalacsiin lagu siiya kolba inta ay dhibaatadiisu la egtahay.